Ngokubanzi, siyazithenga izinto zokucoca indlu ukuba zifunxe inkunkuma, kodwa enyanisweni, izinto ezininzi azinakuncanywa, kwaye usenokungazi kakuhle. Ke namhlanje siza kuxoxa ngento engenakunyanzeliswa zizicoci zokucoca. Khumbula ukujonga ngakumbi kwaye ungenzi nantoni na eyingozi kwizicoci zokucoca.
Uninzi lwezinto zokucoca izinto esizisebenzisayo ngoku zizinto zokucoca ngesandla. Sonke siyazi ukuba izinto zokucoca ngesandla ezigcinwe ngesandla azinakho ukufunxa ulwelo, kubandakanya inkunkuma yasekhitshini kunye nenkunkuma emanzi. Banokufunxa inkunkuma eyomileyo kuphela. Nangona kunjalo, isicoci seemele se-emele siyakwazi ukufunxa ulwelo, olulunge kakhulu kwindawo enkulu okanye inkunkuma eninzi ekhaya.
Okwesibini kukuba isicoci esisebenza ngesandla asinakukwazi ukufunxa izinto zesinyithi. Enye into kukuba inokukrwela indebe yothuli, kwaye enye kukuba iya kujikeleza ukuphakama kwendebe yothuli, enokuthi ichaphazele ukonakala kwescreen sokucoca kwaye ibangele isicoci sendlu singasebenzi ngokwesiqhelo.
Okwesithathu zizinto ezinkulu zamasuntswana. Imibhobho yethu imxinwa kwaye mincinci. Izinto ezinkulu zamasuntswana ziya kuthintela imibhobho. Okwesibini kukuba abanakho ukujikeleza ngesantya esiphezulu xa bencancisiwe. Nangona kunjalo, izinto zokucoca izinto zinokufunxa amandongomane kunye nezikhumba zembewu ye-melon, into enamandla kakhulu kwizicoci zokucoca amakhaya.
Izicoci zokucoca umoya azinakuncancisa nantoni na. Uyaqonda? Namhlanje, yenzelwe ukucoca ngesandla. Ukuba zezinye iindlela zokucoca izinto zokucoca, zinokwahluka, ke nceda ukhumbule ukubona iinkcukacha xa uzithenga.